Tuugsadayaasha London waaba taajiriin caadi ah iyo sir laga helay. – Filimside.net
Tuugsadayaasha London waaba taajiriin caadi ah iyo sir laga helay.
In la tuugsadaa diiniyan ma banana laakiin waxaa jiraan dad maalinkasta tuugsado waliba iyagoo siyaabo kala duwan tuugsiga u maro.
Dadkaas tuugsada waa kamid ah dadka wadooyinka jiifa isla markaasna dadka gacanta u hoorsado si ay naxariis ugu muujiyaan isla markaasna lacag u siiyaan.
Magaalada London waxay kamid tahay meelaha uu tuugsiga ku badanyahay iyadoo dadka wata dharka jeex jeexan ee wadooyinka hareer fadhiya aad u badanyihiin hase yeeshee waxaa la ogaaday in dadkaas qaarkood ayba taajiriin yihiin.
Mid kamid ah dadka tuugsado ayaa la ogaaday inuu daganyahay guri aad u weyn oo aysan xitaa dadka caadiga ah kiradiisa iska dhiibi Karin halka mid kalana la sheegay in maalinkasta ay soo gasho lacag dhan 800 oo dollar.
Sida uu qoray wargeyska Daily Mail baaritaano iyo dabagal lagu sameeyay dadka ka dawarsado magaalada London ayaa intooda badan lagu ogaaday ineysan masaakiin aheyn aheyn balse ay yihiin dad raba tuugsiga iney ka taajiraan waxaana qeyb ah xitaa kuwa shirkado ganacsi saamiyo ku leh.
Wargeyska wuxuu intaas ku daray barnaamijka Baaritaankaan oo socday mudo 2 bilood ah ayaa waxaa lagu ogaaday in dadka caadiga u tuugsada ay ka lacag badanyihiin kuwa maqaaxiyada, Hoteelada iyo xarumaha ganacsi ka shaqeeyo isla markaasna lacago aad u badan soo gasho.